Umfelokazi ufele izimbuzi zomcimbi - Ilanga News
Home Izindaba Umfelokazi ufele izimbuzi zomcimbi
Umfelokazi ufele izimbuzi zomcimbi
Amasela abentshontsha izimbuzi obekuzokwenziwa ngazo ihlambo lomyeni wakhe
KASIPHELI isililo nengebhe emndenini wakwaMdakane, eTatane, eMtshezi ngenxa yamasela emfuyo adubule abulala umfelokazi wa-khona ngoMgqibelo entathakusa ngesikhathi ewakhuza entsho-ntsha izimbuzi obekuzokwenziwa ngazo ihlambo lomyeni wakhe.
UNkk Gcwalisile Mdakane (57), (osesithombeni) ufela imfuyo ya-kwakhe nje, ama-sela kawaqali ukugasela emzini wakhe njengoba kuthiwa ake afika ngoNhlolanja (February) nonyaka – umyeni wakhe esaphila, kodwa esentekenteke ngenxa yokugula – ashaqa izinkomo eziwu-7 esiba-yeni.
Indodakazi kamufi, uNkz Londiwe Mdakane (27), ebikhuluma neLANGA ikhihla isililo, ithi kayazi ukuthi yini le elandelwa ngamasela kubo.
“Namhlanje sisele dengwane ekhaya njengoba sekubulawe umama obevikela izimbuzi zakhe, ezigcine zihambe nababulali. Sibuhlungu ngokusehlele njengoba ebulawe esazilele ubaba owaqiniswa wukugula okuhambisana nengcindezi yenhliziyo ebuhlungu emuva kokushaqwa kwezinkomo zakhe.
“Ngifisa noma ngubani ongangi-pha umsebenzi ukuze siqhubeke nomfowethu, sibambe umuzi wabazali bethu,” kusho uNkz Mdakane.
Lesi sigameko sishaqise nobu-holi bakule ndawo – ILANGA lango-mhla ka-5-7 kwephezulu elaloba ukuthi ubuholi baseMangweni bukhathazekile ngokubulawa
Ekhuluma neLANGA unduna-nkulu wesizwe saMangwe, uMnu Nowa Dlangalala, uthe bebene-
themba lokuthi emuva kokubika kwaleli phephandaba ngokudla-nga kokubulawa kwabantu esizweni sabo, kuzokwehla ukuhlaselana, kodwa ubona sengathi bebethela upharafini emlilweni ovuthayo.
Uthe emuva kombiko weLANGA mhla ka-5-7, sekubulawe abantu abane, bedutshulwa, kuhlanganisa naye uNkk Mdakane.
“Kuyimanje isizwe siphithene amakhanda ngalezi zidumbu ezigi-ngqika nsuku zonke endaweni. Sisabonisana siyisizwe ngokuhla-ngana nabakhulu kuhulumeni, kubhekwe ukuthi bangasisiza yini sithole uphiko lwamaphoyisa
ayisipesheli oluzosilekelela kutho-lakale umnyombo walokhu kuhla-selwa kwabantu ngoba sididekile manje,” kusho uMnu Dlangalala.
Ikhansela lakule ndawo engaphansi kuka-ward 5, kuMasipala Inkosi Langalibalele, uMnu Sanele Mbongwa, lithe kabasazi ukuthi kungeneni endaweni yabo.
“Abantu babulalana ngesihluku esesabekayo. Kubuhlungu okwe-nzeke kwaMdakane kubulwa inkosikazi ivele isemanzini, izilele
umyeni wayo. Siyile emndenini safica isimo esingesihle sezemali njengoba bekusanda kupataniswa kungcwatshwa inhloko yekhaya.
“Ngiye ngahlangana nosonhlalakahle esifundeni sethu, sahla-nganisa okuthile ukuze umama angcwabeke njengoba indodakazi yakhe endala nendodana yakhe encane bengasebenzi. Sibafice bengazi ukuthi bazothathani bayihlanganise nani ukuze bangcwabe unina.
“Singakuqinisekisa ukuthi esikutholile ngosizo lomphakathi, umndeni sewuzokwazi ukungcwaba namhlanje ngoLwesine. Ibuhlungu impilo ephilwa endaweni yethu njengoba sekubulawa namakhosikazi,” kusho uMnu Mbongwa.
UCapt Nqobile Gwala, okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uthe amaphoyisa aseMa-ngweni avule idokodo ngokudu-
tshulwa kubulawe owesifazane ohlaselwe emzini wakhe kuntsho-ntshwa izimbuzi.
“Lona wesifazane uvuswe wukukhonkotha kwezinja ngabo-2 entathakusa, kwathi uma evula umnyango wabona abesilisa besesibayeni sezimbuzi, bavulela ngenhlamvu kuyena washonela endaweni yesehlakalo. Ilungu lomndeni lithole ukuthi izimbuzi ezintathu zithathiwe ngabahlaseli. Bekungakaboshwa muntu,” kusho uCapt Gwala.
UNkk Sindiswa Zikhali okhulumela uMnyango wezokuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi KwaZulu-Natal, utshele ILANGA ukuthi umnyango wabo unalo ulwazi ngokwenzeka esizweni saMangwe.
“Lolu daba selusingethwe yisifundazwe njengoba ikhona nemikhankaso eyenziwayo ngamaphoyisa yokukhuza abantu nokubafundisa ngokusebenza komthetho. Yona le mikhankaso ihamba ngolonwabu ngoba beku-ngakavumeleki ukuhlanganisa abantu abaningi ngenxa yemiba-ndela yeCovid-19.
“Uhulumeni uzama ngazo zonke izindlela ukudala uzinzo kuleya ndawo osekuchitheke kakhulu igazi kuyona,” kusho uNkk Zikhali.
Previous article“Kwakungeke kusize ngalutho ukwesula”
Next articleEzintsha ngokususa uNyazi eBuhleni